Gobolka - Bogga 4 - Nidaamka Baradhada
Xadka sanadlaha ah ee kabista deymaha jilicsan ee jihada "Dalag" ayaa kordhay
Wasiir ku-xigeenka Beeraha Elena Fastova ayaa qabtay shir ku saabsan hirgelinta habka amaahda ee amaah-bixinta. Elena Fastova waxay xustay in ...
Ururka baradhaduhu wuxuu la yimid waxqabad siinaya dhammaan soosaarayaasha beeraha xaaladda "shirkadaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah". Sida ku xusan borotokoolka shayga 9, aaladda…
Kuban, silsiladaha tafaariiqda waxay bilaabeen inay la galaan qandaraasyo la fududeeyey beeroleyda si loo helo alaabada
Waxay ka wada hadleen sidii loo yareyn lahaa khasaaraha noocyada yar yar ee maaraynta iyada oo la raacayo xaaladaha karantiil marka lagu jiro shir gobol oo uu guddoominayo Veniamin Kondratyev. Habka go'doominta ...
Dhamaan wadooyinka waxay u furan yihiin alaabada
Wasaaradda Wershadaha iyo Ganacsiga ee Ruushku waxay amar ku siisay gobollada inay hubiyaan marinka loo maro baabuurta sida cuntada iyo alaabada daruuriga ah. Tan waxaa lagu sheegay wareegtada ...
Bishii Abriil 2, 2020, Ururka baradhaduhu wuxuu ka qaybqaatey kulan lagu soo qaaday muuqaallo muuqaal ah oo ku saabsan jiritaanka abuurista baradhada iyo ...
Shaqada Goobta Guga
Laga bilaabo Maarso 31, 2020, 18,3 milyan hektar ama ...
U fiirsashada madaxyada shirkadaha ganacsiga!
Marka la eego duruufaha jira ee la xidhiidha cudurka faafa ee COVID-19 iyo baahida loo qabo in la bixiyo wax soo saarka beeraha iyada oo loo baahan yahay xoogagga shaqaalaha, Xukuumadda Ruushka ...
Qorshayaasha 2020 waa in la kordhiyo wax soo saarka dhammaan kooxaha wax soo saarka khudradda ilaa 25%
Wasiir ku-xigeenka koowaad ee Beeraha Dzhambulat Khatuov ayaa qabtay shir looga hadlayey horumarinta khudradda kobcinaysa gobollada Russia, kaqeybgalayaasha oo looga hadlay arrimo ...
Xarunta abuurista baradhada ee baradhada ayaa laga dhisi doonaa gobolka Tomsk
Qorshayaasha abuuritaankiisa waxaa tixgeliyey gudi isku dhaf ah oo ku aadan hirgalinta mashaariicda maal gashiga ee waaxda beeraha iyadoo uu hogaaminayo kuxigeenka gudoomiyaha gobolka Tomsk ...
Oleg Gryaznov: waa waqtigii fiiro gaar loo siin lahaa ganacsiga yar yar iyo beeraha
Kulankii caadiga ahaa ee ay yeesheen xukuumada gobolka Tver ayay kaga wada hadleen u diyaar garowga sidii loo qaban lahaa shaqooyinka guga ee gobolka. Ujeeddooyinkaas oo ah 2020 ...